I-Glossary Ikota - I-Chelate Inkcazo
Yintoni i-Chelate eKhemistry?
I- chelate yinkomfa ye- organic eyenziwe xa i-polydentate ligand bonds kwi- atom yesimbi . I-Chelation, ngokubhekiselele kwi -IUPAC , ibandakanya ukubunjwa kwamabhondi amabini ahlukeneyo okanye ahlukeneyo phakathi kwe-ligand kunye ne-atom ephakathi. Iigands ziyi-agents chelating agents, i-chelants, i-chelators, okanye i-agent-sequetering agents.
Ulwaphulo lwe-Chelation lisetyenziselwa ukususa izinyithi ezinobungozi, njengobuthi obunzima bensimbi.
I-Chelation isetyenziselwa ukwakha izongezelelo zondlo. Ama-agent achukumisayo abasebenzisa izichumisi, ukulungiselela ama-catalysts ahambelanayo, kunye nee-agents ezichaseneyo kwi-MRI.
Uninzi lwamamolekyuli e-biochemical luyakwazi ukutshabalalisa izixhobo zetsimbi ukwenza i-chelate complexes. I-Polynucleic acids, iiprotheni, i-amino acids, i-polypeptides kunye ne-polysaccharides zonke zizenza njenge-polydentate ligands.
I-ligand ethylenediamine i-bidentate yakha ingxube ye-chelate kunye ne-ion yobhedu ukwenza i-CuC 2 N 2 yangaphakathi.
Phantse zonke i-metalloenzymes zibandakanya izitye zetekisi, ngokuqhelekileyo kubacwangcisi, ii-peptides, okanye amaqhinga.
Ukufudumala kweekhemikhali ezifudumeleyo ngokuqhelekileyo ngenxa yee-chelants eziphilayo ezithatha i-ioni zensimbi ezivela ematyeni nakwiimaminerali.
Uninzi lwezondlo ezincedisayo lulungiswa ngokukhangela ion isimbi ukwenzela ukukhusela isinyithi ekuveleni izakhiwo ezinomsila ongenasipholisi esiswini. Ezi zongezelelo zibonelela ngeyona ndlela iphakamileyo.
I-catalysts ezihambelanayo, ezifana ne-ruthenium (II) i-chloride etyuliswe nge-phosphine ene-bidentate, rhoqo i-tile complexes.
I-EDTA kunye neefosphonates zifana neentengiso eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukunciphisa amanzi.
Uphi uvavanyo lwe-Acid kwiGeology?
Iimpahla - Amathambo ama-Swiss eCeramics
Indlela yokufumana i-12 x 1000 € ukuhlala eJamani-Akukho zikhonkwane
Fumana ngeKholam yaTuscan
Ubuciko be-Olmec kunye noCwecwe
Ubudala bePericles kunye nePericlean Athene